कोरोना संक्रमण झनै बढेपछि देशव्यापी कर्फ्यूको घोषणा, कहिलेबाट हुन्छ लागु ? — Sanchar Kendra
एजेन्सी । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारी झनै बढेपछि प्रधानमन्त्रीले देशव्यापी कर्फ्यू घोषणा गरेका छन् । टेलिभिजनमार्फत् राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले दोस्रो लहरको महामारीका कारण आइतबारबाट देशब्यापी कर्फ्यू लगाउनु परेको बताएका हुन्।
राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म लगाइएको कर्फ्यूको समयमा हिँडडुल गरेमा कारबाही गरिने सरकारी अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् । दोस्रो लहरको संक्रमण देखिएको स्पेनमा संक्रमित संख्या ११ लाख नाघेको छ ।
कोरोना भाइरसको महामारी अहिले सारा विश्वमा नै व्याप्त छ । अहिलेसम्म ११ लाख ५९ हजार १८६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ करोड ३३ लाख ५३ हजार २८७ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यस्तै ३ करोड १९ लाख ७ हजार २५८ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने ७७ हजार ७९२ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमितको हिसावले नेपाल विश्वको ३४ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालमा हालसम्म ८४७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ लाख ५८ हजार ८९ जनालाई संक्रमण भएको छ । त्यस्तै १ लाख ११ हजार ६७० जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने ४५ हजार ५७२ जना उपचाररत छन् ।
उता चीनको सिन्जियाङमा प्रान्तमा एकजनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि बृहत परीक्षण गरिने भएको छ । सिन्जियाङको काशगार सहरका विद्यालयहरू बन्द गराइएका छन् भने परीक्षण रिपोर्ट निगेटिभ नआएसम्म त्यहाँका बासिन्दालाई शहर नछोड्न आदेश दिइएको छ ।
सिन्जियाङको काशगार सहरमा करिब ४७ लाख मानिसहरूको परीक्षण गरिँदछ। अहिलेसम्म लक्षण नदेखिएका १३८ सङ्क्रमित फेला गरेका छन् । संक्रमण दर घटाउन समग्रमा चीन सफल देखिएको छ । तर संक्रमण फैलिने क्रम भने सुषुप्त रुपमा जारी नै छ ।
सिन्जियाङमा मूलतः मुस्लिम उइगर अल्पसङ्ख्यक बस्छन् जसलाई बेइजिङस्थित सरकारले उत्पीडन गर्ने गरेको मानव अधिकारवादी समूहहरूले आरोप लगाउने गरेका छन् । काशगार सहरको बाहिरी भेगस्थित शुफु काउन्टीस्थित एउटा गार्मेन्ट कारखानामा काम गर्ने एक महिलामा पहिलो पटक लक्षणविनाको संक्रमण देखिएको हो ।
चिनियाँ सरकारी सञ्‍चारमाध्यमका अनुसार ‘नियमित परीक्षण’का क्रममा ती महिलामा संक्रमण भएको पाइएको हो । चिनियाँ मुख्य भूभागमा विगत १० दिनयता पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमित परेका हुन् । ती महिलामा कोरोना देखिएपछि परीक्षण व्यापकरुपमा सुरु गरिएको हो ।
लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितलाई चीनमा आधिकारिक रूपमा संक्रमण पुष्टि गरिएको कुल सङ्ख्या ८५,८१० मा जोड्ने गरिएको छैन । कोरोना भाइरसबाट चीनमा हालसम्म ४,६३४ जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
यसको उपचार कसरी भइरहेको छ त? सङ्क्रमणकाल
प्रारम्भिक अवस्थामा तपाईँ बिरामी पर्नुहुन्न। केही मानिसलाई त कहिल्यै कुनै लक्षण नै देखिँदैन। भाइरस स्थापित हुने सङ्क्रमणकालीन अवधि सरदर पाँच दिनको भएको पाइएको छ। अधिकांश सङ्क्रमित मानिसले यो बेहोर्नुपर्छ। कोभिड-१९ भन्ने रोग १० मध्ये आठ जनाका लागि सामान्य रोग हो। उनीहरूलाई रुघा लाग्ने र ज्वरो आउने गर्छ।
शरीरका अङ्ग दुख्ने, घाँटी दुख्ने र टाउको दुख्ने समस्या हुन सक्छन्। तर ती लक्षण देखिन्छन् नै भन्ने छैन। ज्वरो आउनु र असहज महसुस गर्नु तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय भएर त्यसले सङ्क्रमणसँग सङ्घर्ष गरिरहेको परिणाम हो। यस्तो बेला भाइरस कुनै बाह्य तत्त्व हो भन्ने बुझेर त्यसविरुद्ध लड्न उक्त प्रणालीले साईटकाईन नामक प्रोटीन परिचालन गर्छ।
यस्ता लक्षण देखिएमा बिरामीलाई ओछ्यानमा आराम गर्न लगाइन्छ र पर्याप्त झोल कुरा खान दिइन्छ। प्यारासिटामोल पनि दिइन्छ। यति बेला अस्पताल नै लगेर विशेष उपचार गर्न आवश्यक हुँदैन। एक हप्तासम्म रहन सक्ने यो अवस्थामा प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय भएका कारण अधिकांश बिरामीहरूलाई निको हुन्छ। तर केही केहीलाई गम्भीर प्रकारको समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।
अहिलेसम्म हामीले बुझेको यत्ति नै हो। तथापि नयाँ अध्ययनले कोही बिरामीको नाकबाट धेरै सिँगान आउने गरेको पनि देखाएको छ। यदि रोग अझै गम्भीर हुँदै गयो भने भाइरसविरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणालीको अधिक सक्रियता त्यसको कारण हुन सक्छ।
“भाइरसले प्रतिरक्षा प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउन थाल्यो भने शरीरमा धेरै जलन हुन सक्छ, त्यस्तो बेला के भइरहेको हो थाहा नहुन पनि सक्छ,” किङ्स कलेज लन्डनकी चिकित्सक नथाली म्याक्डर्मट भन्छिन्। फोक्सोमा हुने जलन नै निमोनिया हो। मुखबाट सासनली हुँदै हामीले फेर्ने सास अर्थात् वायु फोक्सोमा भएका ससाना कोठामा पुग्छ।
त्यही कोठाबाट अक्सिजन रगतसँग मिसिन्छ र कार्बनडाईअक्साईड बाहिर निस्किन्छ। तर निमोनिया हुँदा ती साना कोठा पानीले भरिन थाल्छन् र त्यसै कारण सास फेर्न कठिन हुन्छ। यस्तो बेला कसैकसैलाई त सास फेर्न सहज बनाउने भेन्टिलेटरको सहायता चाहिन्छ। चीनबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार १४ प्रतिशत बिरामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छन्।
बिरामी भएका छ प्रतिशत व्यक्ति मात्र अति गम्भीर बिरामी हुने गरेको पाइएको छ। यति बेलासम्म शरीर निस्तेज हुन थाल्छ र मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यति बेला मानिसको रोग प्रतिरोध गर्ने प्रणाली नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको हुन्छ र पूरै शरीरभित्र क्षति पुगिरहेको हुन्छ।
यस्तो बेला बिरामीको रक्तचाप डरलाग्दो तहमा झरेर अङ्गहरूले काम नगर्ने वा पूरै विफल हुने ‘सेप्टिक शक’ भनिने अवस्था आउन सक्छ। फोक्सोमा धेरै जलन भएर बिरामीले सास फेर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि बाँच्नको लागि पर्याप्त अक्सिजन प्राप्त हुँदैन। त्यस्तो बेला मिर्गौलाले रगत सफा गर्न पनि सक्दैन आन्द्रामा समेत क्षति पुग्न थाल्छ।
“भाइरसले यति धेरै जलन गराउन थाल्छ कि तपाईँको धेरै अङ्गहरूले काम गर्न छोडिदिन्छन्,” डा. भरत पाखानियाले भने। यदि प्रतिरक्षा प्रणालीले भाइरसलाई जित्न सकेन भने त्यो शरीरको सबै भागमा पुग्न थाल्छ र त्यसले अझै धेरै क्षति पुर्‍याउन थाल्छ। यस्तो बेलामा गरिने उपचार अलि बढी नै कडा हुने गर्छ।
यस्तो बेला एम्को भनिने बाहिरी यन्त्रको सहायताले रगतमा अक्सिजन दिने प्रणाली प्रयोग गरिन्छ। त्यो कृत्रिम फोक्सोजस्तै हो जसले शरीरको रगतलाई बाक्लो नलीको सहायताले बाहिर निकाल्छ त्यसमा अक्सिजन भर्छ र फेरि भित्र पठाउँछ। तर भाइरसको प्रभाव बढ्दै गएमा क्षति खतरनाक तहमा पुग्छ। त्यति बेला अङ्गहरूले शरीरलाई जीवित राख्न सक्दैनन्।